China L-cystine vagadziri uye vanotengesa | Boyu
CAS Kwete: 56-89-3
Molecular Kurema: 185.29
EINECS HERE: 200-296-3
Pasuru: 25KG / Drum, 25kg / Bhegi
Maitiro Ehutano: Yakasviba cystine, USP, AJI
Hunhu: White crystalline kana crystalline upfu, soluble muna sanganisa acid uye alkali mhinduro, chaizvo insoluble mumvura, insoluble mu ethanol.
Chitarisiko Machena machena kana crystalline poda
Kutenderera kwakananga [a] D20 ° -215.0o ~ -225.0o
Kurasikirwa pakuoma ≤0.20%
Residue pamusoro kuvesa ≤0.10%
Iron （Fe） -10ppm
Heavy simbi （Pb） -10ppm
Organic Volatile Kusachena Inosangana nezvinodiwa
Chromatographic Kuchena Inosangana nezvinodiwa
Munhu akaidza 98.5% ～ 101.0%
Zvishandiso: Mishonga, chikafu chinowedzera, chikafu chekudya, zvipoda uye mamwe maindasitiri.
1. Iyo inoshandiswa kugadzirira kweiyo biological tsika yepakati, ine mabasa ekusimudzira iyo oxidation uye kudzikiswa kwemasero emuviri, ichiita kuti chiropa chishande zvine simba, kukurudzira kuwanda kwemasero machena eropa uye kudzivirira kukura kwehutachiona hwehutachiona. Inonyanya kushandiswa kune akasiyana alopecia. Inoshandiswawo kuzvirwere zvinotapukira zvinotapukira zvakadai sedyentery, typhoid fever, furuwenza, asthma, neuralgia, eczema uye dzakasiyana zvirwere zvine chepfu, nezvimwewo, uye zvine basa rekuchengetedza mapuroteni ekumisikidza.Inobatsira mukuumbwa kweganda uye yakakosha ye detoxification. Nokuderedza kugona kwemuviri kutora mhangura, cystine inodzivirira maseru kubva kune chepfu. Kana ichigadziriswa, inoburitsa sulfuric acid, uye sulfuric acid inoenderana nemakemikari nezvimwe zvinhu kuwedzera detoxification basa reiyo metabolic system.Kubatsira kuwanisa insulin, insulin inodiwa kuti muviri ushandise shuga uye starch.
Icho zvakare chakakosha chikamu cheamino acid infusion uye mukomboni amino acid kugadzirira;
2.Used seyakavaka muviri yekuwedzera uye yekunaka mumiririri. Inoshandiswa kumazamu emulsification yemukaka hupfu. Dhaga simba rekusimudzira, rinoshandiswa mune zvekubheka chikafu (yeast Starter), poda yekubheka.
3.Sefidhi inovaka muviri inosimbisa, inobatsira kukura kwemhuka, kuwedzera huremu hwemuviri uye chiropa uye itsvo basa, uye nekuvandudza mhando yehuswa.
4.Inogona kushandiswa seye cosmetic additives kusimudzira ronda kupora, kudzivirira ganda allergies uye kurapa eczema.
Yakachengetwa:munzvimbo dzakaoma, dzakachena nedzine mweya. Kuti tidzivise kusvibiswa, zvinorambidzwa kuisa chigadzirwa ichi pamwe chete nehupfu kana zvinhu zvinokuvadza. Nguva yekupera ndeyemakore maviri.
Q1: Ndeapi michina yekuyedza iyo yako kambani ine?
A1: Analytical Balance, Constant Temperature Kuomesa Ovhoni, Acidometer, Polarimeter, Water Bath, Muffle Furnace, Centrifuge, Grinder, Nitrogen Determination Instrument, Microscope.
Q2: Zvigadzirwa zvako zvinorondwa here?
A2: Ehe. Musiyano wechigadzirwa une musiyano batch, iyo sampuro ichave yekuchengetedza kweanopfuura makore maviri.
Q3: Inguvai ndeyechokwadi nguva yezvigadzirwa zvako?
A3: Tow makore.
Q4: Ndeapi matanho akasarudzika ezvigadzirwa zvekambani yako?
A4: Amino acids, Acetyl amino acids, Feed zvinowedzera, Amino acid mafetiraiza.
Q5: Ndeapi masimi zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kushandiswa?
A5: Mishonga, chikafu, zvipoda, chikafu, kurima
Pashure: L-Cysteine ​​Hydrochloride Monohydrate
Amino Acid L-Cystine